विराट कोहलीको बैंगलोर आइपीएलबाट आउट » खबरहरुको एउटै केन्द्र
विराट कोहलीको बैंगलोर आइपीएलबाट आउट
आईतवार, जेष्ठ ६, २०७५ ११:३८ मा प्रकाशित !
काठमाडौं, ६ जेठ । आइपिएलको यस सिजनमा रोयल च्यालेन्जर्स बैंगलोर प्लेअफमा पुग्न असफल भएको छ ।
शनिबार भएको पहिलो खेलमा राजस्थान रोयल्ससँग ३० रनले पराजित भएपछि प्लेअफमा पुग्न असफल भएको हो ।
जित सँगै राजस्थान भने १४ अंकसहित प्लेअफको नजिक पुगेपनि यसको टुंगो भने अन्य टिमको खेल सकिएपछि मात्र लाग्ने भएको छ ।
राजस्थानले दिएको १६५ रनको लक्ष्य पछ्याएको बैंगलोरले १९.२ ओभरमा अलआउट हुदै १३४ रन बनाएपछि खेल ३० रनले हारेको थियो ।
बैंगलोरमाथि जित हासिल गर्ने क्रममा राजस्थानका बलर श्रेयस गोपालले ४ विकेट लिएका थिए भने जयदेव उनदकान्त र बेन लौघलिनले २ विकेट लिएका थिए । त्यस्तै गोथ्वाम र इश सोढ़ीले एक एक विकेट लिएका थिए । त्यस्तै बैंगलोरका लागि एबी डिविलीयर्सले सर्वाधिक ५३ रन बनाएका थिए भने पार्थिव पटेलले ३३ रन बनाएका थिए ।
यसअघि टस जितेर पहिला ब्याटिंग गरेको राजस्थानले २० ओभरमा ५ विकेट गुमाउदै १६४ रन बनाएको थियो । राजस्थानका लागि राहुल त्रिपाठीले सर्वाधिक ८० रन बनएका थिए । त्यस्तै कप्तान अजिख्य रहानेले ३३, हेनरिक क्लासेनले ३२ र गोथ्वामले १४ रन बनाएका थिए ।
राजस्थानले यो जितपछि १४ खेलमा १४ अंक बनाएको छ । त्यस्तै किंग इलेभेन पंजाव १३ खेलमा १४ अंक रहेको छ । सनराइजर्स हैदरावाद र चेन्नई सुपरकिंग्स प्लेअफमा पुगेका छन् भने अब दुई स्थानको लागि राजस्थान, पंजाव, मुम्बई र कोलकोता प्रतिष्पर्धामा रहेका छन् ।
PREVIOUS POST Previous post: नागढुंगा–धुलिखेल मेट्रो निर्माण अघि बढ्यो : मेट्रो निर्माणका लागि विश्व व्यापी बोलपत्र, लागत दुई खर्ब
NEXT POST Next post: साउदीमा हाल सम्म कै ठूलो परिवर्तन, अब महिलाले पनि गाडी चलाउन पाउने
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते आईतवार, जेष्ठ ६, २०७५ ११:३८
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस आईतवार, जेष्ठ ६, २०७५ ११:३८
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण आईतवार, जेष्ठ ६, २०७५ ११:३८
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी आईतवार, जेष्ठ ६, २०७५ ११:३८
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? आईतवार, जेष्ठ ६, २०७५ ११:३८